फास्ट फास्ट कल्पनामा किन पुगे प्रियंका र सुनिल ? - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
फास्ट फास्ट कल्पनामा किन पुगे प्रियंका र सुनिल ?
२५ बैशाख, काठमाडौं । अहिलेकी चर्चित नायिका प्रियंका कार्कीलाई देखेपछि सबैको ध्यान जानु कुनै नौलो होइन । सुनिल क्षेत्री पनि नायिका कार्कीकै चियाचर्चोमा कल्पना निवास पुगेका छन् । सुनिल किन यसरी पछि लाग्ने त फास्ट फास्ट कल्पनामा ?